INetflix India StreamFest - Jabulela ukusakazwa kwezinsuku ezimbili kule mpelasonto - Ezokuzijabulisa
INetflix imemezela ukubhaliswa kwamahhala eNdiya izinsuku ezimbili. Kuyisikhathi sesivivinyo esizokusiza ukuthi ubone amathuba angenamkhawulo ngokusakaza. INetflix ngomunye wemikhiqizo yokusakaza enkulu eNdiya. Kuzuzisa kakhulu labo jabulela ukusakazwa kwamathani wokuqukethwe online . Kuyisiteji esigcwele imibukiso nokuthokozisayo okuvela kuwo wonke umhlaba. I-India inamandla amakhulu emakethe kulabo abasakaza okuqukethwe online. Babiza lokhu ngokuthi yi-StreamFest ye-India.
Mayelana neNetflix StreamFest:
I-StreamFest ingumcimbi wangempelasonto ozokwenzeka ngomhlaka 5 no 6 kuDisemba ezweni lonke. Uzokwazi ukuzama ipulatifomu ngaphandle kokukhokha i-rupee eyodwa. Kulawa mahora angama-48, uzokwazi ukubuka noma yini enhle kakhulu. Kukhona, noma kunjalo, kunemikhawulo embalwa ebekelwe labo abavakashela ukuhlola inkundla.
Yini Oyothola Ku-StreamFest?
I-StreamFest ikunikeza izinzuzo eziningi kanye nezinketho ezahlukene zokusakaza. Abasebenzisi bangathola ukufinyelela kumahora wokuqukethwe mahhala ngalo mcimbi. I-StreamFest iyisidingo kulabo abafuna ukuhlola izici zeNetflix. Nazi izinzuzo zokubhalisa -
Ukuvuselelwa - iNetflix StreamFest IndiaJabulela ukusakazwa kwamahhala kwezinsuku ezi-2 kuNetflix (abasebenzisi baseNdiya). Ungachofoza inkinobho engezansi bese ubhalisela.
1. Ukufinyelela kwamahhala kwezinsuku ezimbili
Amahora angama-48 azogcwala ukuzijabulisa okungenamkhawulo. Ungabuka imibukiso eminingi emangalisayo, ama-movie, ne-anime kuwebhusayithi nakuhlelo lokusebenza.
2. Incazelo Ejwayelekile
I-Stream Fest izokunika amandla wokubuka imibukiso kuphela encazelweni ejwayelekile. Kodwa-ke, kumahhala ngokuphelele ukusetshenziselwa wonke umuntu, ngakho-ke akufanele kube yinkinga enkulu. Incazelo ejwayelekile inikela ngekhwalithi enhle yokusakazwa kumaselula nakwamanye amadivayisi.
Izidingo zokusakazwa kwamahhala zeNetflix:
Ungahle uzibuze ukuthi ubhalisela kanjani umcimbi wokusakaza mahhala weNetflix. Kumahhala ngokuphelele ukuthi wonke umuntu ajoyine. Abasebenzisi bangangeza kalula imininingwane kuwebhusayithi bese beqala ukusakaza. Inqubo ilula kakhulu.Asikho isidingo sanoma yiliphi ikhadi lesikweletu noma imininingwane yokukhokha. Iwebhusayithi iyayemukela imininingwane yakho futhi iyakukhumbuza.
Awudingi ukuchitha isenti elilodwa kulokhu okubhaliselwe kwamahhala. Noma ngubani ohlala eNdiya angasebenzisa ithuba lomcimbi wamahhala. INetflix India iqala lokhu ukukhulisa ukubhaliswa kwabo ezweni.Kuyindlela yokunikela izilingo zamahhala kuwo wonke umuntu isikhathi esincane. INetflix ibingasanikeli isikhathi sokulingwa senyanga eyodwa kubasebenzisi abasha. Bayeka lokhu ukwenza isiqiniseko sokuthi abantu abaningi bakhokhela le nsizakalo. Kunzima ukukwenza dala ama-akhawunti bese ubakhansela nganoma isiphi isikhathi.
Yinde kangakanani le ntengo?
Ukunikezwa kuzotholakala kubasebenzisi izinsuku ezimbili kuphela. Izinsuku zibekelwe ukuba kube nguDisemba 5 no-6 ngokufanayo. Ungaqala ukuyifinyelela ngokushesha nje lapho iwashi lishaya phakathi kwamabili. Izosebenza kuze kube ngu-6 Disemba ngo-11: 59 PM. Isevisi yokusakaza yamahhala itholakala ngokuphelele izinsuku ezimbili.
Izinyathelo zokubhalisela i-Netflix StreamFest:
I-StreamFest iqala ngomhlaka 5 no 6 kuDisemba. Abasebenzisi bangabhalisa namuhla futhi bathole izinzuzo. Kuyindlela ephelele yokusakaza okuqukethwe mahhala ezindlekweni. Ungalandela izinyathelo ezinikezwe ngezansi futhi ujabulele ukuzijabulisa okumangazayo. Nazi izinyathelo okufanele uzilandele kule nqubo -
Abasebenzisi bangaqala ngokuvakashela iwebhusayithi yeNetflix. Ilungele labo abajabulela umugqa wesikhathi omkhulu wokusakaza. Sincoma abasebenzisi ukuthi bavakashele lokhu isixhumanisi .Lapha ungabhalisa usebenzisa i-akhawunti yakho ye-imeyili noma inombolo yocingo. Lapho ufaka imininingwane yakho, kulula kakhulu ukuthola isikhumbuzi.
Kuyamangalisa! Manje iNetflix izokwazisa uma i-StreamFest isiqalile. Uzothola izibuyekezo ezizenzakalelayo ngokushesha okukhulu.
INetflix ememezela ukubhaliswa kwamahhala eNdiya izinsuku ezimbili isenzo esihlakaniphile. Kuyindlela yabo yokwenza ukukhushulwa kwamahhala ngomsebenzi wabo. Siyethemba ungathola izinzuzo eziningi ngalomcimbi wokuphromotha wamahhala.
I-Best Free VPN ye-Mac (2020) - Kulula ukuyisetha nokuyisebenzisa